Weriyaha Lagu Daldalay IRAN – somalilandtoday.com
Weriyaha Lagu Daldalay IRAN
Ruuxullah Zaam ayaa la daldalay Sabtidii kaddib markii Maxkamadda ugu sarraysa ee dalka ay meelmarisay xukun dil ah oo ninkaas lagu xukumay, waxaa sidaas ku warramay taleefishinka dowladda.
Ma cadda sida lagu xidhay Zaam oo musaafuris ugu noolaa waddanka Faransiiska. Waxaa lagu soo warramay in la qabtay kaddib mar uu sannadkii la soo dhaafay u safray waddanka Ciraaq.
Shabakaddaas oo ay raacaan in ka badan hal milyan oo qof oo ku xidhan bartooda barnaamijka Telegram, ayaa waxa ay dadka la wadaagaysay muuqaallada dibadbaxyada iyo xog waxyeelo gaysan karta oo ku saabsan saraakiisha Iiraan.
Zam oo ah wiil uu dhalay wadaadka isbadal doonka ah ee Maxamed Cali Zam, ayaa horaantii sannadkan waxaa lagu helay “musuqmaasuq baahsan” kaasi oo ah mid ka mid ah dambiyada ugu culus ee dalka soo mara.
Waxaa magangalyo siyaasadeed laga siiyay Faransiiska, isagoo ku xirnaa Iran kaddib doorashadii madaxtinimada ee lagu murmay ee Iiraan ee 2009.
Ciidamada Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan (IRGC) waxay hore u sheegeen inay adeegsadeen “hab sirdoon oo casri ah iyo xeelado horumarsan”, taas oo u suurtagalisay inay “khiyaanaan” adeegyada shisheeye ayna gacanta u dhigaan Zam.